UMato Madlala uyivimbile ekaKhenyeza ebheke kwiLeopards
UMato Madlala uyimise nse imizamo yeBlack Leopards yokufuna iphini lomqeqeshi kwiLamontville Golden Arrows, uMabhuti Khenyeza ukuba shiye kuleli qembu laseThekwini aze kuyo.
ILeopards ibimfuna uthuli uKheynyeza owayengumgadli ngezikhathi zakhe zakudala, ngemuva kokugculiseka kukasihlalo wayo, uDavid Thidiela ngemuva kokuxoxisana naye ngeledlule.
“Lokho yinto engeke isenzeka,” kusho umthombo osondelene naleli qembu laseLimpopo. “ILeopards ibimfuna kodwa ngesikhathi bekhuluma ne-Arrows, uMato ubancengile ukuthi bamnike omunye unyaka owodwa kwi-Arrows.
“Uthe ngeke akwazi ukulahlekelwa yibo bobabili abaqeqeshi uMandla Ncikazi (osanda kujoyina i-Orlando Pirates) noKhenyeza, ngesikhathi esisodwa.
“Udinga umuntu olazi kahle iqembu ukuthi ahlale asize uLehlohonolo Seema ajwayele eqenjini. ILeopards ibimfuna ngempela uKhenyeza futhi izinhlelo zabo seziphazamiseke kakhulu. Kodwa bayakuqonda ukuthi ngeke bamthole,” kuqhuba lo mthombo.
FUNDA NALA: UCastro ufuna babuyele kulo mqondo ababekuwo bewina e-Angola abeChiefs
UKhenyeza ubeyiphini likaNcikazi ngemuva kokushiya kuMaZulu, lapho ebeyiphini likaJozef Vukusic khona. Ngaphambi kwalokho ubengumqeqeshi kwiTS Galaxy ngesikhathi isadlala kwiGladAfrica Championship.
Kuthiwa njengamanje unobudlelwano obuhle nabadlali be-Arrows futhi iningi labo belibheke ukuthi kunikwe yena umsebenze ngemuva kokuhamba kukaNcikazi.
Previous Previous post: UCastro uthi ukubambisana kuphela okuyosiza iChiefs ibuye nendebe eMorocco
Next Next post: UManyama uthi i-Al Ahly isiyingozi kakhulu njengoba seyijicwa uPitso nje